Accueil > Gazetin'ny nosy > Henry Rabary-Njaka: Ho fampiroboroboana ny fandrobana ny harem-pirenena
Henry Rabary-Njaka: Ho fampiroboroboana ny fandrobana ny harem-pirenena
Isan’ireo tompon’andraikitra Hvm tsy very mandeha amin’ny fahazoana ny fahaefam-panjakana i Henry Rabary Njaka. Talen’ny kabinetran’ny fiadidiana ny Repoblika izy raha vao tafakatra teo amin’ny toeran’ny filohampirenena i Hery Rajaonarimampianina. Nifanindran-dalana tamin’izany izy dia filohan’ny filankevi-pitondran’ny orin’asam-pitaterana an’habakabaka Air Madagascar.
Samy nesorina taminy ireo andraikitra ireo satria isan’ny olona niantefan’ny fanakianana mivaivay noho ny tsy fahatafavoahan-dRajaonarimampianina ny raharaham-pirenena i Henry Rabary Njaka.
Na dia tsy nisahana an’ireo andraikitra ireo intsony aza anefa izy, ara-pomba ofisialy, dia hita ho nitana an-kolaka, tsy ofisialy, toerana ambony ihany teo anilan-dRajaonarimampianina.
Niarahantsika nahita aloha ny nihafaran’ny vondrom-pitaterana an’habakabaka Air Madagascar fa na ny mpiasa tao izay nitaky ny zony sy naneho hevitra momba ny izany orin’asa izany aza dia noroahina tamin’ny fomba feno fanamparam-paheafana, ary na nahazo rariny teny anivon’ny fitsarana aza ireo mpiasa mba ho tafaverina amin’ny asany, dia niziriziry ny tompon’andraikitra tsy nety namerina azy ireo, hatramin’izao.
Nisy ihany koa ny fahavoazana goavana nianjady tamin’ny Air Madagascar tamin’izany, satria taorian’ny naha-filohan’ny filankevi-pitondrana ny Air Madagascar an-dRajaonarimmapianina tokoa (nandritra ny tetezamita), dia i Henry Rabary Njaka no nandimby azy, izay nitohizan’ny fahapotehan’io orin’asam-pirenena io koa.
Taty aoriana izy dia voatendry ho minisitra ny Raharaham-bahiny indray izy. Iarahantsika mahita ny fitokonan’ny mpiasan’ny raharaham-bahiny, noho ny tsy fanomesan-kasina azy ireo amin’ny maha-diplaomaty azy ireo sy amin’ny asa sahanin’izy ireo nefa dia voasokajy ho toy ny tsinontsinona ireo mpiasa ao.
Ankehitriny, ny ministeran’ny Harena ankibon’ny tany indray no nomena hosahaniny. Maro sahady ireo milaza sy maneho hevitra fa hampiroborobo sy hampihombo ny fandrobana ny harem-pirenena izy io, ary vao mainka hanome vahana ny vahiny hanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena eto.
Maro ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena no milaza fa “karazan’ny fihantsiana ny vahoaka Malagasy mihitsy no ataon’ny filohampirenena amin’izao fanendrena an-dRabary Njaka Henry ho minisitra ny Harena ankibon’ny tany izao”. Fihantsiana satria fantatra ny filohampirenena tsara, hoy ny ako isan-karazany, fa andrandrain’ny vahoaka ho fanoitran’ny fanavotana sy fanarenam-pirenena ny harena ankibon’ny tany eto nefa dia olona ea fanta-daza amin’ny kolikoly sy fanodinkodinaa ny fahefam-panjakana ho amin’ny tombontsoany manokana, olona mpitsikombakomba amin’ny raharaham-panjakana no ampisahanina izany ministera goavana sady fakam-panahy be izany.
Lakana dobo tao Mahajanga: Olona 6 maty, 3 tsy hita popoka
Pasitera Mailhol: Mifangaro tanteraka ny pôlitika sy ny fiangonana
Akfm: Manohana an’i Andry Rajoelina fa mametraka fepetra
Ravelonarivo, Rajoelina, Ravalo, Rajao, Mailhol: Ireo no nalaza tamin’ny sabotsy